हाम्रो तीनजना सांसद भएको भए कांग्रेसका नेताहरुले संसदभित्रै कुटाइखाइसक्थे – लिङदेन – सजल सन्देश
हाम्रो तीनजना सांसद भएको भए कांग्रेसका नेताहरुले संसदभित्रै कुटाइखाइसक्थे – लिङदेन
By Sajal sandesh	 On५ पुष २०७६, शनिबार ०२:०४
इलाम – संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुुवान मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले प्रदेश नं १ को संसदमा आफ्नाे पार्टीको कम्तिमा तीन जना सांसद भए कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरुले अहिलेसम्म कुटाइ खाइसक्ने थिए भनेका छन् ।
शुक्रबार इमालको चुलाचुलीमा आयोजित कार्यक्रममा नेता लिङदेनले कांग्रेस–नेकपाका नेताहरुले विचारले नसुन्ने भएकाले उनीहरुमाथि भौतिक रुपमै आक्रमण गर्नुपर्ने बताए ।
‘विष्णु तुम्बाहाम्फे एक जना हुनुहुन्छ । एक जनाले कुनै प्रस्ताव पनि लान नपाइने । तीन जनासम्म भएको भए कुन–कुन कांग्रेस एमाले सभासदरुको दाँत झारिदिइसक्थ्यौ यतिखेर संसदमा,’ आक्रोश व्यक्त गर्दै नेता लिङदेनले भने, ‘किनभने यिनीहरुले बिचारले सुन्दैनन् । यिनीहरुलाई दुई चार मोबाइलको झट्टी हान्नैपर्छ, जुता हान्नैपर्छ ।’
कांग्रेस नेकपाका नेताहरुमाथि संसदभित्र चप्पल हान्ने हिम्मत आप्mनो पार्टीले मात्र गर्न सक्ने उनले बताए ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोतर्फ लक्षित गर्र्दै उनले भने, ‘केन्द्रीय अध्यक्ष नै ओलीकोमा गएर हजुर ओली हजुर प्रचण्ड हजुर देउवा भनेर भनेपछि त्यो पार्टी कस्तो हुन्छ ? त्यो पार्टीले आन्दोलन गर्छ ? मैले पत्याइनँ । त्यो काम अरुले सक्दैन । सबैको नारी छामिसकियो । त्यो काम संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले गर्छ ।’
उनले चप्पल उठाएर कांग्रेस नेकपाका सांसदहरुलाई हान्दा हँदै भए कारबाही गर्ने संसदबाट निकाल्ने भन्दै त्यति नगरेसम्म ती नेताहरु लाइनमा नआउने तर्क गरे ।
देशका नेताहरुलाई टक्कर दिन आफू जन्मेको भन्दै लिङदेनले भने, ‘चप्पल उठाएर एमाले कांग्रेसको नेताहरुलाई हान्नुपर्छ । त्यति नगरी यो डाका भ्रष्टाचारीहरु लाइनमा आउँछ ? त्यो क्रान्तिको जरुरत छ, त्यसको लागि दम हुनुपर्छ ।’
सो क्रममा उनले बाहुनहरु आफ्नाे सत्रु नभएको सिंहदरबारमा बस्ने शासकहरु मात्रसत्रु भएको बताए ।
उनले पहिचानवादी पार्टीहरु धेरै भए पनि उनीहरुसँग आफ्नाे सिद्धान्त नै नमिल्ने बताए ।
उनले आफूहरुको मूल सिद्धान्त सहअस्तित्ववाद भएको प्रष्ट पारे ।
सो क्रममा उनले अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले ठुला ठुला विकासका योजना नेपाली सेनालाई दिने र सबै मिलेर कमिशन खाने गरेको बताए । नेपाली सेना देशको सीमा सुरक्षामा नखटेर ठेकापट्टा र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बताए ।
सुन्धाराको २५ रोपनी जग्गा गा यब, कसले गर्दैछ भोगचलन ?
सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज दुई खेल हुँदै